February 2014 | Kachin news
weapon training at northern kachin, burmese army and monks ( photo news )
Posted by Admin at 8:50 AM |0 comments
Comment by-Zau Seng
what I can foresee from this photo is that Burmese Armies will use the strategies in frontier. They will use this monks in battle field, when they were shot, they will show those corpses as the evidence and spread the news that KIA is killing Myanmar Monks, and here the photos. And they will name KIA is terrorists, the all Burmese Buddhists will take part in this case. HA HA HA HA HA stupid Burmese Military.
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရမှ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကျန်းဖက်သမားများ (photo)
By: facebook:: ဘဝ အလွမ်း ....သေနတ်ကိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလို့တာလီဗန်ဘုန်းကြီးနဲ့ မြန်မာဘုန်းကြီးပဲမြင်ဖူးတယ် မြန်မာတာလီဗန်ဘုန်းကြီးတွေပါ။
Like · · about an hour ago · Edited ·
Ven Ravika ကိုင်း မပြောဘူးလား။
ဒီလိုဘုန်းကြီးမျိုး တကယ်ရှိနေတယ်လို့လေ။ ဒီလိုလူမျိုး ဘုန်းကြီးလောကထဲ ဝင်ပြီး သာသနာကို ဖျက်ဆီးကြမှာ သေချာတယ်။ သာသနာတော်အတွက် ရင်လေးစရာ ကောင်းလေစွ။သထုံကို တိုက်တုန်းက အရည်းကြီးရဟန်းစစ်သည်တော်တွေလည်း ပါလာခဲ့ကြမယ်လို့ မစဉ်းစားမိကြဘူးလား။
Kachin Myu sha nien dai sumla kaw mu lu ai sanat gap sharin nga ai Bukda Hpungkyi ni hte Pyitu Sit ni gaw Tinang KIA, hpe shing la ga sat na matu re da. Myen asuya ni gaw anhte Kachin ni hpe mung Ra Hkai - Gala mang hkang zawn, Anhte Kachin myu sha ni hte Hpunau Sam Bukda ni hpe mang hkang bai byin wa na hku bai ladat shaw ga law taw sai ngu ai gaw n dai sumla hpe yu yangasan sha dan dan leng leng mu lu nga sai re. Dai majaw daini na aten hta anhte Kachin myu sha ni hku nna lam sha gu hta sha woi na hta grau nna grai sadi maja let ,tsun shaga galaw sa mat wa na re ngu sha dum dat lu n ngai.
(Ntai n mai-Lachid Kachin)
Read more+++click on FB link+++
ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်နေတာ စစ်ခွေးအစိုးရ ရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဗျုဟာတစ်ခုပါ ။ သန်းရွှေ မင်းအောင်လှိုင် သိန်းစိန် ခေတ်မှ မဟုတ်ဘူး အရင့်အရင် ဗမာအစိုးရအဆက်ဆက် လုပ်နေကျ သုံးနေကျ ဗျုဟာတွေပါ ။ ကချင်ရွာတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတွေက ထောက်လှမ်းရေး ၊ စရဖ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရသတင်းပေး ဖြစ်နေတာ မဆန်းတော့ဘူး ။ သင်္ကန်းဝတ် နဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ပစ္စတို ခါးကြားထိုးပြီး လျှောက်သွားနေတတ်သေးတယ် ။နောက်ပြီး ကချင်ရွာတွေမှာ ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းအများစုက အစိုးရစစ်တပ်တွေ စခန်းချရာနေရာ ဒါမှမဟုတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကာဗာယူပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်သူ့ သတင်းထောက်လှမ်းဖို့စသဖြင့် အသုံးချပါသေးတယ်။
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် စစ်စစ်များက ဒါတွေကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ပါဘူး ။ ဒါဟာ အင်မတန်အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ ။ နိုင်ငံတော် အာဏာကို ရယူထားတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် အနေနဲ့ဒီလို ဘာသာတစ်ရားကို ခုတုံးလုပ် အသုံးချတာ အင်မတန် ရှက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ သိက္ခာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ ။
ဒီပုံ မှာ ဘုန်းကြီးတွေကို စစ်သင်တန်းပေးနေတဲ့ စစ်ခွေးတွေက မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာချုပ်တံဆိပ် နဲ့ ဆိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း က နေရာတစ်နေရာဖြစ်မှာပါ။
ဓါတ်ပုံတင်ပေးတဲ့ မိုးဇေညိမ်း ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ ။ စစ်ခွေးအစိုးရရဲ့ ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သက်သေအထောက်အထား နဲ့ အားလုံးမြင်တွေ့ ရတဲ့အတွက်ပါ ။ မဟုတ်ရင် ကေအိုင်အေ က တစ်ဖက်သတ် လုပ်ကြံဝါဒဖြန့် ပါတယ်ဆိုပြီး ဖင်ကုန်းအော်တတ်လွန်းလို့ ပါ ။
Posted by Admin at 12:00 PM |0 comments
In this file photo, soldiers of Kachin Independence Army (KIA) man their position at the frontline near Mai Ja Yang in Kachin State on 22 January 2013.(PHOTO:Reuters)
By--DVB-- NAW NOREEN
"RED CODE FOR THE KACHINS"
Posted by Admin at 9:03 PM |0 comments
မြန်မာအစိုးရ မှKIA, အားအကြီးအကျယ် ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင် ဖွယ်ရှိ
The source from Myanmar-China boarder said that the Chinese Government announced their Chinese citizens in all over Myanmar and boarder areas to return to their home country not later than Feb 14th, 2014 (Friday). This breaking news will be impact on minorities for those who live in Myanmar-China boarder, especially for the Kachins. All the Kachins have to be alert and should be prepared for what the sugar-coated Myanmar Democratic government and the Chinese government are agreed upon.
တရုတ် အစိုးရမှ တရုတ် -မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက် မြန်မာ ပြည်ဘက်ခြမ်းတွင် အလုပ် ၀င်ရောက် လုပ် ကိုင်နေ ကြသော ၄င်းတို့၏ တရုတ် နိုင်ငံသား များအား ယခုလ (၁၄.၂.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ထက်နောက်မကျ ဘဲ (နောက်ဆုံး) ထားဤ တရုတ် ပြည်သို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လာ ကြပါရန် နယ်စပ် တလျှောက် ၊ အထူးသဖြင့် ကချင် ပြည် နယ် နယ်စပ် ဒေသများသို့ အရေးပေါ် ထုတ် ပြန်ကြေငြာ နေ ကြောင်း၊ ၄င်းတို့ ၏ နိုင်ငံသားများ အား အရေးပေါ် ပြန်ခေါ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တရုတ် အစိုးရမှ ဤကဲ့သို့ ၄င်းတို့ ၏နိုင်ငံသားများအား အရေးပေါ် ပြန်ခေါ် ခြင်းသည် တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက် တွင် မြန်မာ အစိုးရ နှင့် KIA တို့ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ရေး ပြန်လည် တင်းမာ လာချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင် နေပြီ့း မြန်မာ အစိုးရ မှ KIA အား အကြီးအကျယ် ပြနလည် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မည့် အခြေအနေ မြင်တွေ့ နေရ သောကြောင့် ဒေသခံများစစ်ပွဲပြန်လည် ပြင်းထန်လာမည် ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Miwa Gumsan Asuya kawn ya yangeMyen mung dan ka ta hte la mu ga jarit hkanechyam bra bungli shang galaw hkawm nga ai Shan hteaMiwa mungdan masha ni hpe Myen mung dan hkran maga de na ndai (feb, 14,2014) ya shani hpang jahtum Miwa mung dan de bai n htang wa lu na matu Miwa Asuya kawn Hkan sha ga n dau taw nga ai lam Myen -Miwa gajarit na buga masha ni kawn shiga sha na wa ai.Ya yangeMyen Asuya hte tinang KIA, ni hpyen masa ga lang bai sha ja hkat wa ai te mung rai nga ai.Dai majaw miwa asuya kawn ya na zawn shan hte miwa mung masha ni hpe myen mung hkran de na bai sha ga la taw ai gaw Myen hte KIA ni majan kaba bai byin hpang wa na masa nga ai lam shiga na chye lu ai.
weapon training at northern kachin, burmese army a...
Fresh fighting in northeast Burma raises concern a...